The Babysitter: Killer Queen (2020) – MM Subtitles
Video Sources 2972 Views Report Error
Sep. 10, 2020USA101 Min.PG
၂၀၁၇ တုန်းက နာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ နက်ဖလစ်ရဲ့ Horror/ Comedy ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Babysitter ကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ။
သူ့ကိုထိန်းပေးတဲ့ ကလေးထိန်းမမ အလန်းစားကြီးကိုကြိတ်ကြွေနေတဲ့ ကိုးလ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ တစ်ည အိပ်ချိန်ကျော်သွားပြီး နေမိရာကနေ သူ့ကလေးထိန်း ဘီး ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူ့အုပ်စုဟာ သွေးအေးလူသတ်သမား ယစ်ပူဇော်တဲ့အလေ့အထကိုယုံကြည်တဲ့ ဂိုဏ်းသားတွေဆိုတာကို အထိတ်တလန့်သိရပြီးတဲ့နောက် လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်ပုံတွေကိုသွေးထွက်သံယို ရင်ထိတ်သည်းဖိုတွေကိုဟာသ နှောပြီးတင်ဆက်ထားတာ အတော်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အခုကားကတော့ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ အပြီးနောက် ၂ နှစ်အကြာ လူပျိုဖော်ဝင်စဖြစ်လာတဲ့ ကိုးလ်တစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ သူပြောပြတဲ့ အဲ့ဒီညကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်သူမှ မယုံကြည်ကြပဲ သူ့ကို စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူ တစ်ဦးလို့ သူ့မိဘတွေကပါ စာရင်းသွင်းထားကြပါတယ်။ သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူကတော့ သူ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း မယ်လနီပါပဲ။
တစ်ညမှာတော့ သူဟာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဆီက ခဏတာ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ မယ်လနီ သူ့ရည်းစား ဂျင်မီ၊ ပြီးတော့ သူတို့သူငယ်ချင်း ဒီယေဂိုးနဲ့ ဘွန်းဘွန်း တို့နဲ့အတူ မြို့အနားက ရေကန်ကြီးမှာလုပ်တဲ့ ပါတီပွဲဆီကို မိဘတွေ မသိအောင်ခိုးထွက်သွားရာကနေ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က အိမ်မက်ဆိုးတွေရဲ့ခြောက်လှန့်မှုကို အစကနေပြန်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာကော သူကံကောင်းနိုင်ဦးမလား? အရင်တစ်ခေါက်က သူ့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေအားလုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ကြိမ် ဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ? သူ့မိဘတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရော ပြန်လည်ရယူနိုင်မလားဆိုတာတွေကို အဖြေရှာကြရပါလိမ့်မယ်။
Duration……..: 1h 41min
TMDb Rating 6.4 132 votes
Download 480p Backup 336 MB
Download 720p Backup 573 MB
Download 1080p Backup 1.12 GB
Download 480p G Drive 336 MB
Download 480p Yandex 336 MB
Download 720p G Drive 573 MB
Download 720p Yandex 573 MB
Watch online 480p Backup 336 MB
Watch online 720p Backup 573 MB
Watch online 1080p Backup 1.12 GB
Watch online 480p Yandex 336 MB
Watch online 720p Yandex 573 MB